Haddii aad u isticmaashay iPhone ah muddo ku filan, waxaa dhici karta inaad ogaan lahaa by hadda in aysan ogolaan in aad tiro tirtirto xiriirada iPhone aad. Miyayse ku habboon tahay in aad u baahan tahay in, sida kaliya ee waa loo sameeyo kaddeedka iyo mid mid.
Si kastaba ha ahaatee, Chine, kuwaas oo ay awoodaan si ay u caawiyaan xiriirada iPhone cad aad u:
2. Xiriirada Delete +
3. Nadiifinta nuqul Xiriir
4. Xiriirada kaabta
6. Nadiifinta & Delete & midowdo Xiriirada nuqul
7. Xidhiidhada Duster Pro
8. ContactsXL + Facebook nidaameed
9. Delete tus + Xiriir
11. Xiriirada Multiple saar - Contact gurmad
12. Ka saar nuqul Xiriirada, Events iyo Xusuusin
15. Xiriirada Multiple Delete
16. Contact Coobbi Spring
Tani waa mid ka mid ah habka ugu wanaagsan ee ay u masixi ahaanteed aad iPhone ee buugga cinwaanka. DeleteQ sameeya shaqada dhakhsaha badan ee aad si fudud u dooran kartaa badan, haddii aanay mar walba, xiriirada iyo kaxeeyo liiska xiriirada aad. Taasoo ah rikoor, app waa ay awoodaan in ay tirtirto ka badan 4,000 oo xiriir 3 daqiiqo gudahood. Haddii aad iPhone waddaa on macruufka 6.0 iyo wixii ka sareeya, waxaad u baahan doontaa inay fasax bixiyaan in app in ay xog helaan in menu gaarka ah goobta. Phone ayaa shil doonaa oo laftiisa Banaadir haddii aadan awood u app in ay dib u soo ceshano xogta ka iPhone.
App Tani waa run ahaantii mid sahlan in ay isticmaalaan si ay u Multi-tir aad buug cinwaanka iPhone. Waxaa weyn in la tirtiro warbixin madax adag in uu diido in uu ka tago aad iPhone ka shaqeeya. Sidoo kale waa ay awoodaan in ay ka heli iyo midowdo xiriirada in ay la dhigay magac la mid ah, laakiin macluumaad kala duwan oo ku jira iyaga oo ku. Interface The fudud waa u fududahay in ay maraan iyo ogaado oo aan kaalmo ka mid ah qaar ka mid ah buugga saxsanaanta.
In kasta oo markii hore loogu talagalay inay ka soo saarto faahfaahinta xiriirka labalaabka, waa inaad awoodid inaad tirtirto buugga cinwaanka Dhan app this noqon. Waa app ah maamulka xiriir weyn u leedahay in aad iPhone, kaliya haddii aad u baahan tahay si ay u tirtiri buugga cinwaanka degdeg ah. Inkastoo app waa halkii si toos ah, weli gacanta xakamayn karto app iyadoo mariya yar. Mid ka mid ah waxa ugu fiican in aan jeclahay oo ku saabsan app tani waa in ay shaqeyn karaan guud ahaan meelo kale oo ka mid ah xiriirada sida aad xisaab Google iyo iCloud. Sidoo kale waa mid ka mid ah app ugu dhaqsiyaha badan erasure halkaas - 5,000 xiriirada baaraandegi in qiyaas ahaan 45 ilbidhiqsi.
In ka badan 5 milyan oo dadka isticmaala ku isticmaaleen app si ay awoodooda buuxda. Waa mid ka mid ah habka ugu fudud ee ay u tirtirto tiro badan oo ka mid ah xiriirada aan baahida loo qabo in xiri iyo nidaamka aad iPhone si aad u computer. Intaa waxaa dheer, app this bixisaa offline raad raac ah oo aad xiriirada liiska iyo cross-qalabka syncing badan email. Dhinaca kale oo kaliya (haddii aad wici lahaa biyodiiday a) waa in mar file ah gurmad la soo saxafadeed, waxaad u baahan tahay si aad u hubiso haddii aad leedahay u helaan tan iyo qaar ka mid ah bixiyayaasha email xannibi files waaweyn.
Qalab isgaarsiin Tani waa fududahay in la isticmaalo aad iPhone. In ka badan 2.9 milyan oo qof ayaa loo isticmaali app ee bilaashka ah la xiriir ay hooyo iyo awoodaha telefoonka. Kale oo ka duwan isagoo taasi app gaadhsiinta weyn, sidoo kale waa app wanaagsan si ay u isticmaalaan si aad u maareyso xiriirada ku saabsan iPhone - waxaa kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan oo ay u maareeyaan kooxo xiriiro. Ma aha oo kaliya in aad fariin tiro dad ah oo kooxda ka mid ah, waxaad tirtiri kartaa karo xiriirada kala duwan ee ka mid go! Sidee looga cabsado waa in? Mar dambe ma aad gelin doonaa dib tacliinta ee ka daalin ee nadaafadda aad buug cinwaanka.
Loogu talagalay in lagu maareeyo xiriirrada aad, app tani waa ay awoodaan in ay qayb weyn tirtirtaa xiriirada kala duwan ee xisaab buug cinwaanka badan. Taas macnaheedu waxa weeye ma aha oo kaliya waxa helaa buugga cinwaanka iPhone, laakiin sidoo kale mid ka mid ah xisaab email aad. Yaac iyo kasta waxaa si toos ah la ogaado oo la tirtiro ilbiriqsi gudahood. Intaa waxaa dheer, in aad isticmaali karto si aad u hagaagsan oo dhan ee aad xiriirka la leedahay dhammaan xisaabaadka in aad leedahay. Waa arrin aad u la isku halayn karo, si degdeg ah oo ammaan ah.
Dareen sida iPhone xaaro ka faahfaahinta xiriirka aan loo baahnayn in aad buug cinwaanka? App Tani waa app fudud, dareen leh oo hufan oo kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto, ku milmaan iyo masixi diiwaanada kala duwan. Waxa la sheegay in app kanu yahay "inta badan cabsi badan" app waxaa si aad u nadiifiso aad xiriirada iyo buugga cinwaanka. Waxay leedahay interface weyn taasina waa u fududahay in ay maraan iyo muuqaalaynta ee buugga cinwaanka gooldhalinta pie waa wax fudud in la arko waxa ka socda gudaha iPhone!
Maareynta aad xiriirka la leedahay iyo in la abuuro koox u soo dirto qoraalka iyo emails ka hawl yar la app this. Waxa kale oo aad awood u yeelan doonaan in ay tirtirto badan xiriir la rabin ka iPhone mar. Waa maxay ka sii la yaab leh waa in aad shaandhayn karo xiriirada ku xiran shuruudaha tusaale xiriirada aan tiro, emails, qoraalada iwm Tani waxay xulashada doonaa waxyaabaha xiriir si sahlan oo ka kaaftoomi lacag la'aan ah.
Wixii ka yar $ 1, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u dhameystiraan hawsha dhowr daqiiqo halkii laba caadiga ah ee saacadood. Waxaad awoodi doontaa in aad tirtirto farabadan ee xiriirada si hufan ay iyaga xulashada gacanta ama iyaga shaandhaynta sida ay qaybaha pre-set tusaale la lambarada telefoonka lahayn, email address iwm Sidoo kale waxaad tirtiri kartaa xiriirada, kuwaas oo ay iyaga kooxaynta.
"Mid ka mid ah Touch" u muuqataa in ay weedh halhays u app this ah. Waxay siisaa fursado badan oo ku saabsan sida in ay tirtirto xiriirada kala duwan ee iPhone oo aan u baahan computer ah. Version cusub ee app ee dhawaan la sii daayay la-oolnimada hagaajinta - hadda waxaad tirtiri kartaa 1,000 xiriirada in 6 ilbiriqsi! Sidee cajiib ah waa in? Kale oo ka soo baxay shaandhaynta iyo tirka xiriirada in uu leeyahay telefoon jirin tiro, emails iyo cinwaanada, app sidoo kale waa ay awoodaan in ay baadhaan oo magacyadooda la doortay xiriirka erasure fudud. Waxa kaliya ee u xun oo arrintan ku saabsan app laga cabsado waa in ay tahay oo kaliya laga heli karaa Shiinaha.
Haddii ay noqoto in aad ka iibsan app ah si ay u maareeyaan aad xiriirka la leedahay iyo ku talo jiraan in ay sameeyaan dhammaan aaladaha macruufka aad, aad u hesho this mid ka mid ah! Waxaa si gaar ah loogu tala galay in la isticmaalo oo dhan iDevices mobile sida iPhone, iPad iyo iPod. Kale oo ka oggolaadaan in aad tirtirto entries xiriir badan, waxaad u isticmaali kartaa in xiriir qiimo gurmad iyo email iyaga qaabab VCard iyo CSV rahmaad ah. Waxa kale oo jira feature waano celis ah in aad beddeli karaa si loo hubiyo in aad buug cinwaanka waxaa si fiican u hayn.
Isticmaal app haddii aad u baahan tahay app ah oo caawin doona in aad ciribtirka Suite ka mid ah macluumaadka aan waxtar lahayn in aad iPhone. Iyada oo ay taasi, waxaad tirtiri kartaa nuqul badan xiriirada, dhacdooyinka iyo xusuusinta, iyo sidoo kale maareeyo kooxo xiriiro oo u soo dir email group ama qoraalka. Inkasta oo ay jiraan waa "pro" version, version aasaasiga ah ayaa durbaba waxaa quruxsan oo dhamaystiran - waxaa ka heli kartaa oo ka saari tus saxda ah, ka saar xiriirada in aan ku lifaaqan magacyada, taleefan lambarrada, cinwaanada email iwm xitaa waad tirtiri kartaa haddii xiriirada kala duwan oo ka tirsan kooxo aad ama baadhno, oo iyaga xulo ka hor ay ka saareen faahfaahinta xiriirka ee ka iPhone.
13. PowerContact (Xiriirada Management Group la Color & Leyliga)
Inkastoo app tani waa ay awoodaan in ay tirtirto xiriirada duwan ee hal mar, waa awood u leh in ka badan in ay sameeyaan. In laga soo app ugu awooda badan buugga cinwaanka xiriirka, waa mid ka mid ah kuwa ugu doonteen app ee AppStore Japan bishii November 2010. Maareynta aad xiriirka la leedahay waa mid xiiso leh iyadoo app, maxaa yeelay waxa ay leedahay interface ka cayaar ah - aad guraan karo kooxaha midabka iyo mawduucyada, iyo sidoo kale iyaga DEAD la walxood. Tani waa ku weyn yahay Sawirashada Qoondayntani ee kooxaha. Waxaa xitaa uu leeyahay awood code QR ah halkaas oo aad si fudud ku dari kartaa xiriirada iyadoo lagu eegayo xeerka QR ah.
App waa xiriirada soomi iyo dareen app ah maamulka kuu oggolaanaysa in aad abaabulo aad la xiriirayso fudayd. Sida Chine hore, waxay u saamaxdaa abuurista kooxo si fudud u guraan iyo tirtirto aad xiriirka la leedahay. Si ay u sii fududeeyo idiin, app aad ogolaanaysaa bookmark iyo DEAD aad xiriirka la leedahay si aad u isticmaali karto waqti yar siyoodba si aad u hesho faahfaahinta aad loogu baahan yahay oo aad rabto inaad la tirtiro. A yar note in la tixgeliyo: shaqeeyeen weyn u awowayaashood ay, laakiin waxa ay u muuqataa sida ay jiraan cayayaanka yaryar ee u baahan in la hagaajiyo ee macruufka 6.
Tani kid cusub oo ku saabsan block ugu eegaynaa. Sida ay magaceeda soo jeedisay, app tani waa mid waxtar leh markii aad u baahan tahay si ay u masixi waxyaabaha xiriir badan loo eegin sababta. Laga soo bilaabo shaashada, waxaad arki kartaa sida sahlan ee app iyo interface yahay. Doorashada xiriirada in aad rabto in aad tirtirto waa u fududahay sida fiican ula interface liis-la mid ah.
Feedback ee app uu ahaa mid wanaagsan guddiga guud ahaan. Waxaad isticmaali kartaa adiga ku iPhone, iPad iyo iPod Touch, inay si fiican u maamuli lahayd buug cinwaanka. Iyadoo app this, waa effortless in ay doortaan xiriirada kala duwan, iyaga tirtirto oo iyaga soo celiyo mar kale. Just xusuusto in awoodda la soo dhaafay oo keliya lagu samayn karaa, haddii aadan "madhin qashinka".
> Resource > masixi > 15 Apps in Clear iPhone Xiriir